I-bungalow One ngaMakhaya oMoya oVulekileyo
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguOpen Air Homes
Igumbi lethu lokulala eli-1 / i-1 yokuhlambela yaseVenice Beach bungalow ifakwe kakuhle, icocekile kwaye yabucala. Inika indawo eninzi yangaphandle kubandakanya indawo yokuhlala etofotofo, itafile engaphandle kunye nebarbecue. I-bungalow ihamba umgama oya kwiivenkile ezintle kunye neendawo zokutyela kwi-Abbot Kinney, iRose Ave kunye nesitalato esikhulu, kunye nokuhamba ngaphantsi kwemizuzu elishumi yokuhamba / imizuzu emi-5 ukukhwela ibhayisekile ukuya elunxwemeni (iibhayisekile zinikiwe).
UKUCOCWA: Ukucoca okuphakathi kweqela lethu lokucoca elifunwayo kukuhlala inyanga yonke. Siza kukulungiselela kwaye sikucwangcisele oku. Intlawulo iya kongezwa kwindawo oyibekileyo kwaye ihlawulwe ngexesha lokubhukisha. Ukucoca rhoqo ngeveki nako kunokulungiswa ukuba oko kukhethwa.
I-PETS: Izilwanyana zasekhaya zivumelekile kwimeko nganye, ekuya kuthi kuyo intlawulo eyongezelelweyo yeedola ezili-150 ngesilwanyana sasekhaya isebenze. Umrhumo owandisiweyo wokuhlala isilo-qabane yi-$300 ngesilo-qabane ngasinye.
Ukufika kwangoko kunye nokuphuma kade kuxhomekeke kuMphathi. Intlawulo eyongezelelweyo ye-1/2 yokuhlala ubusuku bonke iya kuhlawulwa kwi-akhawunti yakho.
Le Bungalow yeCraftsman inawo wonke umtsalane weVenice yehlabathi yakudala enezixhobo zanamhlanje. Ikhaya lethu labucala libonisa indawo yokuphumla yangaphandle ejikelezwe ngocingo lwabucala. Ibekwe kwindawo esembindini kuyo yonke into yaseVenice kunye nesitalato esikhulu, iSanta Monica kufuneka ibonelele; kulula ukuphuma kwaye ujonge ngeenyawo okanye ngenye yeenqanawa zethu zaselwandle.
Le ndawo yenye yee-bungalows ezintathu zokulala enye elwandle. Ibungalow nganye inebhedi enkulu enomandlalo weCasper otofo-tofo.
Kukho indawo yokupaka eninzi yesitrato ejikeleze iBungalows. Sikwanazo neendlela ezimbini zokusikeka ngokuthe ngqo ngaphandle kwamasango e-bungalow athi "akukho kupaka", kodwa yeyeendwendwe zethu kuphela.
-I-Window air conditioner ngeenyanga zasehlotyeni.
-Igumbi elinye lokulala kunye nebhedi enkulukazi.
-Songa i-queen ubukhulu bebhedi w/umatrasi wesiko.
-Ukulungiswa kwegumbi lokuhlambela elitsha (akukho bhafu)
-Ikhitshi egcwele ngokupheleleyo w/isitya sokuhlamba kunye noMashini weNespresso
-Cable HD smart TV w / Netflix kunye nebar yesandi kumculo weBluetooth
-Ihitha eludongeni, ifestile yomoya ngexesha leenyanga zasehlotyeni, kunye nabalandeli abaninzi. Kubandakanya fan yesilingi kwigumbi lokulala.
-Wifi yesantya esiphezulu
-Iibhedi zangaphandle, itafile yokutyela kunye neendawo zokuhlala.
Sibonelela ngamashiti, iitawuli kunye negumbi lokuhlambela ukuze usetyenziswe ngexesha lokuhlala kwakho. I-shampoo, kunye nesepha nazo zinikezelwa. Ukuba ufuna iitawuli ezongezelelweyo okanye ibhedi, nceda usazise.
Umfanekiso wesikwere: 636
4.95 · Izimvo eziyi-257
Kukho ukucocwa kwesitrato kwelinye icala lesitrato phakathi kwe-10-12pm ngolwesiThathu nangoLwesine. Uya kufumana itikiti ukuba upakwe kwisitrato ngexesha lokucoca isitrato ngoko sicebisa ukuhambisa imoto yakho ngaphambi kwexesha!
Umbuki zindwendwe ngu- Open Air Homes
Izimvo eziyi-1 531
Sinamalungu angaphezu kwama-26 asebenza nzima eqela le-Open Air Homes elizinikele ekuqinisekiseni ukuba unamava amnandi ngokuhlala nathi!
Kananjalo sinonxibelelwano lwe-24/7 ukuze uqiniseke ukuba umntu ovela kwiqela le-Open Air uya kuba khona xa kufuneka usifune nangayiphi na iyure ebusuku.
Kananjalo sinonxibelelwano lwe-…
UOpen Air Homes yi-Superhost